ကျန်းမာတဲ့ Office Life တစ်ခု ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ....... - Hello Sayarwon
တစ်နေ့တာကို အလုပ်တွေလုပ်ရင်း ကုန်ဆုံးနေရတာနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်နိုင် ဖြစ်နေပြီလား………. ရုံးအလုပ်တွေကိုလည်း မပျက်ကွက်ဘဲ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီးသားဖြစ်အောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ဝေမျှပေးပါရစေလား……..
အလုပ်ကြိုးစားတာက ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝကို ဖန်တီးနိုင်တယ်
အလုပ်ကြိုးစားတာက ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝအခြေအနေကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်ကြိုးစားတာ မှန်ပေမယ့် ခေါင်းမဖော်တမ်း အလုပ်လုပ်ရင်း ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေစေဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့
လမ်းလျှောက်တာက အလွယ်ကူဆုံးသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပါ။ ဒီတော့ ရုံးခန်းထဲမှာ တစ်ခုခု ပြောစရာရှိတဲ့အခါ chat box ကနေပြောတာထက် ပြောချင်တဲ့သူဆီကို လမ်းလျှောက်သွားပြီး ပြောလိုက်ပါ။ လုပ်လို့ရသေးတာ နောက်တစ်ခုက ရုံးသွားတဲ့အခါ ကားကို ခပ်ဝေးဝေးမှာ ရပ်ခဲ့ပြီး လမ်းလျှောက်တာမျိုးပေါ့။ ဓာတ်လှေကား အစား လှေကားသုံးတာကလည်း အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ခေါင်း အစ ခြေအဆုံး ခန္ဓာတစ်ခုလုံး အကောင်းဆုံး လည်ပတ်နိုင်စေဖို့ဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့က တော်တော်လေး အရေးကြီးတာပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်များနေပါစေဦး။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ ၈ ခွက် ပြည့်အောင်သောက်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းပြီး အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို လျစ်လျူမရှုသင့်ဘူးဟုတ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွေ ပိလာပြီခံစားရရင် အလုပ်ထိုင်ခုံလေးမှာ ခါးမတ်မတ်လေး ထိုင်ရင်း ဝင်သက်ထွက်သက်လေး မှတ်ကြည့်နော်။
အကြောလျှော့တာက အရိုးအဆစ်တွေကိုရော ကြွက်သားတွေကိုပါ ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်အားသာချက်တစ်ခုက ခုံနေရာမှာတင် လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ဒီတော့ ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ လက်အကြောတွေလျှော့တာလိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို လုပ်ပေးပါ။ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် You Tube ဗီဒီယိုလေး တွေကြည့်လုပ်ပါ။
အလုပ်များနေရင်တောင် ရုံးမှာရှိတဲ့ လေသာဆောင်လိုနေရာမျိုးကို ခဏလောက်ထွက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်လေး ရှုပေးပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ရုံးတက်ရတာ အလုပ်များတယ် မှန်ပေမယ့် နေ့လယ်စာကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ထမင်းဗူးထည့်လာပါ။ ဒါမှ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဘဝ တိုးတက်မှုအတွက် အလုပ်လုပ်ရမယ် ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာမှ သွားချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုဆီကို အရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုပုံစံကို အခုပဲ ဖန်တီး လိုက်ရအောင်လား……….
အလုပ်ခွင်မှာ ငိုက်မနေစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ လုပ်ကြည့်ပေးပါ